Qoyska Ikraan Tahliil oo digniintii ugu dambeysay u jeediyay Farmaajo | Dhacdo
Home Wararka Maanta Qoyska Ikraan Tahliil oo digniintii ugu dambeysay u jeediyay Farmaajo
Qoyska Ikraan Tahliil oo digniintii ugu dambeysay u jeediyay Farmaajo
Waalidiinta dhalay Ikraan Tahliil Faarax ayaa ka horyimid wareegtada uu Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo guddiga ugu magacaabay kiiska gabadhaasi.
Hooyo Qaali Maxamuud Guhaad oo ah hooyada dhashay Ikraan Tahliil ayaa sheegtay inaanay ku qanacsanayn guddiga uu Madaxweynuhu u magacaabay kiiska gabadhooda.
“Waxaan halkan ummadda Soomaaliyeed uga caddeynaynaa, anagoo ah waalidiinta Ikraan, Qaali Maxamuud Guhaad iyo Dr. Tahliil Faarax Axmed, kuma qanacsanin, mana aqbali doono warqadda uu Farmaajo guddiga ugu xilsaaray baaritaanka kiiska Ikraan Tahliil. Waxaan ku qanacsanahay oo keliya Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ee Qaranka, oo aan horey ugu gudbinay dacwadayna.” Ayay tiri Qaali Maxamuud Guhaad.
Qaali Maxamuud ayaa tiri “Tallaabadan iyo tallaabooyinkii ka horeeyay ee uu Madaxweynuhu xilka cusub ugu magacaabayay dadkii lagu tuhmayay gabadhayna, haddii uu ka hor wareeggi waayo, joojina waayo is hortaagitaanka in cadaalad loo helo gabadhayna, waxaan u qaadanaynaa in Madaxweynaha laftiisu uu bixiyay amarka lagu afduubay gabadhayna.”
Waxay kaloo tiri “Haddii Madaxweynaha uu ka waantoobi waayo inuu hor istaago cadaalad u raadinta gabadhayna, waxaan ka gudbin doonnaa dacwad lid ku ah Madaxweynaha, oo gal aan furan doono, kuna dacween doono Farmaajo, dal iyo dibad.”
Qaali Maxamuud oo Warbaahinta kula hadleysay Magaalada Muqdisho ayaa tiri “Farmaajo kiiska gabadhayda Ilaahay waa uga baqi waayay, gabadhiisa camal waa uga baqi waayay, Madaxweyne inuu u yahay camal waa uga baqi waayay.”
Kiiska Ikraan Tahliil ayaa lagu macneeyay mid madax wareer ku riday Saraakiishii Hay’adda NISA iyo Villa Somalia qudheedaba.
Previous articleRa’iisal Wasaare Rooble oo la kulmay Ururada Bulshada Rayidka (SAWIRRO)
Next articleRooble oo la kulmay Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federaal